Musha Wekuenzana Mutemo Inowedzera Kudzivirirwa Kwekodzero dzeHuzhinji kune veGay naTransgender - New York Times - TELES RELAY
HOME » mwe Musha Wekuenzana Mutemo Inowedzera Kudzivirirwa Kwekodzero dzeVanhu Kuvanhu VechiGay uye Transgender - New York Times
WASHINGTON - Imba yakapfuudza mutemo wekuvhara musi weChishanu kubvisa rusarura pamusana pehutano hwepabonde uye hutano hunhu.
Bhuku racho, rakapfuura 236-173, rinouya seTrump mahurumende ekubvumira akadzinga maitiro ehuchani. , bisexuals uye transgender vanhu, zvakadai sokurambidza vashandisi vekuregererwa kubva kushanda muchiuto, kana kuramba zvachose kunyunyuta kwevadzidzi ve transgender avo vakadzivirirwa kubva mudzimba dzomudzimba dzinofanana nehutano hwavo.
"Nyaya iyi haisi iyo kana mhomho ye LGBTQ inotarisana nekusarura nekunyadzisa, nokuti zvinyorwa zvinoratidza kuti izvi ndizvo zviri pachena," akadaro Jerry Chirongwa cheNew York Nadler, sachigaro weChristian Committee. "Mubvunzo ndewokuti isu, seCongress, tinoda kuita chimwe chinhu kuti tiite chimwe chinhu pamusoro pazvo. Mhinduro yacho inosvika pamwoyo wezvinhu zvatinoda kuva se- nyika - uye nhasi mhinduro iyi inofanira kunge iri "hongu". "
Mutemo, unogadzirisa 1964's Civil Rights Act, unorambidza rusarura kune vebibi. , gay, bisexual uye transgender vanhu mumagariro evanhu uye vari voga, vachidzivirira kodzero dzevanhu mune zvebhizimisi, zvipatara uye hurumende. Inotsanangura zvakajeka kuti kukwanisa kuchinja makamuri nekushandura makamuri hakugoni kurambwa kune vanhu nenzira imwechete
Zvisinei, Republican-inodzorwa Senate uye White House mhinduro inogona kunge iri nhamba inowedzera
. kufunga nezve "kuchengetedzwa kwevakadzi nevanasikana munzvimbo dzakaderera" uye "kuchengeteka kwehana" panzvimbo yevashandi vezvehutano avo vanoramba kuita maitiro avanoona kuti vanoremekedzwa, hurumende inopesana kusvika pamwero, zvichienderana neshoko remutemo rekutaura rakagadzirwa neThe New York Times. Nekusimbisa kuti hutungamiri "hwakatenda mukuremekedzwa kwevanhu vose", chirongwa chacho chakakonzerawo kushungurudza kuti mutemo unogona "kusimbisa zvikoro kudzidzisa uye kusimbisa dzidzo yepabonde kusanganisira huzivi hwemadzimai hunotsanangurwa ne pachako. "
VaRepublicans in the House vakaratidza kutya uku. Chishanu. Mumiriri weGeorgia, Doug Collins, Representative Republican paChristian Committee, akatora pasi kuti aratidze kuti mutemo unogona kukuvadza vana uye kuderedza kodzero dzevanhu vakadzi vakadziwana.
"Ndinokumbira vandinoshanda navo kuti vateerere nhau Vose vanobatana, kusanganisira vasikana nevadana vakomana, kuti mushumo uyu unofanirwa kubatsira, nokuti tinogona kuvakuvadza nekubvumira vanachiremba kuti vataure mahomoni uye kuita chirwere chikuru kune vechidiki pasina kubvumirwa nekubatanidzwa kwevabereki vavo, "akadaro Collins.  Kubva pakutora hurumende, hutungamiri hweMutungamiri Trump hwakagadza chirevo chekugadziriswa kwemitemo nemitemo yekudzivirira vanhu vanoita gay uye vanhu vanoita zvevanhu. Mune 2017, Dhipatimendi reRuramisiro rakabatana nemuridzi wechitoro chepastry uyo akaramba kuronga gorosi remuchato kune murume nemudzimai mumwechete uye akaisa zvinyorwa zvemutemo zvinoreva kuti mutemo unokosha wekodzero dzevanhu 1964 haina kurambidza rusarura nekuda kwepabonde. Jeff Sessions, ipapo Attorney General, zvakare akadzorera mirayiridzo yezvikoro kudzivirira vadzidzi vanopinda muzvokugeza uye makamuri ekuvhara.
Miitiro yakafanana yakagadzirwa nedzimwe nhengo dzeKomiti. Sangano rehutano nehupfambamwe hwevanhu hwakatanga kushanda kujekesa mutemo wepabonde sekusagadzikana kwehupenyu hwehutano hwakatemwa nemarudzi ekuberekwa, The Times yakashuma. gore rapera .
Vatungamiri vakagadzawo vatongi vanoverengeka vakatsigira kuparadzwa kwezvidziviriro zvinoenderana nekuita zvepabonde. Jeff Mateer, uyo akatarisirwa kumatare eruwa akazobviswa, akarondedzera vana va transgender seuchapupu hwe "chirongwa chaSatani". Mutungamiri Mateer uye mumwe muDare reDare reMatunhu, Matthew J. Kacsmaryk, vakanyorera kuDhipatimendi reZeruzhinji uye Social Services avo vakatsvaga kudarika kodzero dzepamusoro dzevanhu vevanhu vanodarika, vachitsanangura ssayendisiti yeJohn University Hopkins uyo akati "manzwiro ekuva kudarika aiva chirwere chepfungwa". VaKacsmaryk vakamirira Seneti yakazara kuti iite kusarudzwa kwake.  "Pasinei nekufambira mberi kwakakosha, vanhu veLGBT munyika yose vanoramba vachiomerwa nekusarurwa zuva rega rega uye vane zvishoma zvishoma," akadaro David Cicilline, Mumiririri weRhodhed Island Democrat, gurukota guru reprojekti. wemutemo. "Inguva yeEquality Act kuti ive mumutemo."
Cameroon: KwaTibor Nagy, secession haisi nzira yekugadzirisa dambudziko reAnglophone.